Home Ngwaọrụ akpụzi Nsukka na Suppliers - China Home Ngwaọrụ akpụzi Factory
Home ngwa oru mmiri ebu
Ntozu oke nke teknụzụ na-aga n’ihu buru ibu, oke ọsọ na ntụkwasị obi siri ike abụrụla akụkụ dị mkpa nke ogo ogo na-aga n’ihu. Ugbu a, nnukwu-ọnụ ọgụgụ na-aga n'ihu zọ akụkụ dị n'ebe nile, akụkụ na-na-na-na na ibu, shapes na-ọzọ na mgbagwoju anya, na-egosi nnukwu s ...
A na-atụ anya na n'ọdịnihu ebu ahịa, mmepe ọsọ nke ebu ebu ga-elu karịa ndị ọzọ ebu, na nkezi na ụlọ ọrụ ebu ga-eji nwayọọ nwayọọ mụbaa. N'ime ha, teknụzụ nhazi ịkpụzi akpụ akpụ na-enyekarị usoro mmepe ndị a: //cdncn.goodao.n ...
Wide ngwa nke 3D ebi akwụkwọ na ebu n'ichepụta. 3D ebi akwụkwọ ngwa mmepụta ebu oghere bụ ọhụrụ omume na mmepe nke uji eze ebu. The metal mmako-belatara ihe Nchikota n'ichepụta technology bụ ihe dị mkpa direction na ubi nke 3D obibi. Ugbu a, h ...
Ngwunye ngwa ngwa ụlọ
Nkọwapụta nke ebu ejiri ngwa ọrụ na teknụzụ ya. Na mgbakwunye na ịkpụzi nwere ọrụ nke akpaka nri, zọ akpụ, lamination metering, ọkpụrụkpụ mkpokọta, ígwè isi Nchikota na ngwaahịa mmepụta, mgbabere uzo nzukọ njikọ, na mgbagwoju ngagharị structur ...
Mgbagwoju ihe owuwu plastic ebu
Ngwongwo ihe nke 8407 nke ihe omuma ABS bu Life Life 1,000,000 Number nke oghere 1 Mould Injection System Hot runold Mould Frame LKM Surface Treatment Texture Ọ ga-abụ ihe na-adọrọ adọrọ iji mee ka ngwakọta na arụmọrụ dị elu nke nhazi ngwa ọrụ site na nhazigharị nke ...
Ndị na-emepụta ebu ebu, Omenala akpụzi, Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Akpụzi Factory, Plastic Fanye Nkedo,